ပင်မစာမျက်နှာ » ထုတ်ကုန်များ » စစ်ထုတ်အိတ်အပ်ချုပ်စက်
description:မော်ဒယ် Sffiltech-snap တီးဝိုင်းစက်
Snap တီးဝိုင်းအချင်း: 100-200mm
Snap band အကျယ်: 19,20,25,30,35,40mm, အခြားအရွယ်အစားများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
Rivets spec: 3mm, တစ်ဝက်ဆွန်း
Filter အိတ်ကော်ကော်ထည့်သည့်အရာအတွက် filter အိတ်မရှိ thread thread
description:filter အိတ်ကော်စက်အဘို့အ Sffiltech
မည်သည့်လူ့အပူကိုမဆိုရှောင်ရှားနိုင်ရန် 2.Guarantee design
စက်အတွက် 4. ပြီးပြည့်စုံသောဒီဇိုင်း
V စတိုင်အရည် filter ကိုအောက်ခြေဂဟေစက်
description:သတ္တုတွင်း၊ ထုံးကျောက်၊ ဘိလပ်မြေ၊ သံနှင့်သံမဏိလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော Polyester filter အိတ်၊ alumina ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ electrolytic aluminium၊ သံထည်မဟုတ်သောသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုင်လုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
အလိုအလျှောက် filter ကိုအိတ်ထိပ်လှည့်စက်
description:filter အိတ်၏ထိပ်ဖက်လှည့်စက်အစစ်အတောင့် filter အိတ် pps acrylic filter သည် pps filter ခံစားခဲ့ရသည်
ဗီဒီယို： https: //youtu.be/7kIFYou09VA
description:polyester filter အိတ်ကို 100% filament polyester fiber ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပ်၏ထိုးနှက်ပြီးနောက်, polyester filter ကိုခံစားခဲ့ရသည့်အပူအစုံပြတ်သားပြီးသောအခါ polyester filter ကိုခံစားပြီး polyester filter အိတ်ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။
description:၁) စက်သည်ပစ္စည်းများချွေတာခြင်းကိုတားဆီး။ သပ်ရပ်စွာချုပ်ထားနိုင်သည်။
၂။ ၎င်းသည်လျှောချည်ယူနှင့်ထွင်ထားသောနှစ်ထပ်အလှည့်ချိတ်ချိတ်ထားသည့်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် parallelstitch လိုင်းနှစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၃) ဒီစက်သည်အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်သောမော်တာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အပ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်
1. ရက်ကန်းသားရေ / သားရေ / ထည်
တိကျစွာ 2.high အစွန်း - align
description:SFFilter မှအလိုအလျောက် filter အိတ်ပြွန်ထုတ်လုပ်မှုကိုဂဟေဆော်သည့်အရာသည် filter အိတ်ပြွန်အတွက်အထူးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှု၏ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ အားစိုက်မှုနိမ့်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်နည်းသည်အပ်အိတ်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ လုပ်ကြံစက်များနှင့်ဖိုင်ဘာဖန်ထည်ယက် filter ကိုအိတ်။
စက်၏အရွယ်အစား: 17m * 1.54m * 1.95m
အပ်ချုပ်ပြေးနှုန်း: & gt; 7m / min
Semi အော်တို filter ကိုပြွန်အပ်ချုပ်စက်
description:က) filter အိတ်များ၏အရွယ်အစားကိုပိုမိုတိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ခ) အလုပ်ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်၊ အမြန်နှုန်း၊ အလိုအလျောက်အပြည့်အဝနှင့်တစ်မိနစ်လျှင် ၇-၁၂ မီတာဂဟေဆော်ခြင်း
ဂ) ချိန်ညှိနိုင်သည့်ဥကိုင်သူ၊ ၁၂၀ မီလီမီတာမှ ၃၀၀ မီလီမီတာမှအပူဂဟေဆော်နိုင်သောအိတ်။
င) SFF ပြွန်လိုင်းအတွက်အဓိကကျသည့်အစိတ်အပိုင်းများ - JUKI 1261 အပ်ချုပ်ခေါင်း (ဂျပန်တွင်လုပ်သည်)
ဖြတ်တောက်ခြင်းဓားများ (ထိုင်ဝမ်တွင်လုပ်သည်)၊ Servo မော်တာ (ထိုင်ဝမ်တွင်လုပ်သည်)၊ ဆင်ဆာ (ယူအက်စ်အေတွင်လုပ်သည်)၊ အင်ဗာတာ (ဂျပန်တွင်လုပ်သည်)
အလိုအလျောက် filter ကိုအိတ်ပြွန်အပ်ချုပ်စက်
description:SFFiltech filter ကအလိုအလျောက် filter အိတ်ပြွန်ထုတ်လုပ်သည့်အပ်ချုပ်လိုင်းသည် filter အိတ်ပြွန်အတွက်အထူးဖြစ်ပြီး၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှု၊ ထိရောက်မှု၊ အလုပ်သမားစွမ်းအားနိမ့်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နိမ့်သည်။ အိတ်လုပ်သောစက်များနှင့်ဖန်မျှင်ထည်ယက်စစ်ထုတ်သည့်အိတ်။
ပင်မစာမျက်နှာ လွန်ခဲ့သော 1 နောက်တစ်ခု နောက်ဆုံး - စုစုပေါင်း 11 1 စာမျက်နှာနှုန်းလက်ရှိစာမျက်နှာ / စုစုပေါင်း 1 20 မှတ်တမ်းတင်